Ọhụrụ ikuku ọkọnọ na wepụ stale ikuku si ụlọ alternately
Mfe ịwụnye site na mgbidi dị n'ime ya na oghere dayameta site na 160-170mm
Nchekwa onwe nwere ike igbochi ụmụ ahụhụ ịbanye na ikuku oyi na-efe azụ mgbe nkeji ahụ kwụsịrị
Mpụga mkpuchi nwere ike igbochi mmiri ozuzo ịla azụ na nnụnụ akwụ
Onye na-agbanwe ihe eji eme ihe na moto EC. N'ihi EC etinyere
technology na onye ofufe na-agba na ala ike oriri na nkịtị na-arụ ọrụ. Igwe ọkụ na-akwado ọkụ ejirila ọkụ
ekpo oke ọkụ nchedo bọl biarin n'ihi na ogologo ọrụ ndụ.
Efere ike Efere
Igwe teknụzụ seramiiki dị elu na-eme ka ọ dị ọhụrụ
arụmọrụ ruo 97% ana achi achi wepụ ikuku mgbake okpomọkụ maka ikpo ọkụ nke ọkọnọ ikuku. N'ihi na cellular Ọdịdị na
pụrụ iche regenerator nwere nnukwu ikuku kọntaktị elu na elu
ihe na-eme ka ikpo oku na ikpo oku.
A na-emeso onye na-edozi seramiiki na ihe mejupụtara antibacterial nke na-egbochi uto nje n'ime ike regenerator. Ihe nje antibacterial na-adịgide maka afọ 10.
Abụọ integrated ikuku nzacha na ngụkọta filtration ọnụego G3 enye bunye ma wepu nzacha ikuku. Ihe nzacha ahụ na-egbochi nnabata nke uzuzu na ụmụ ahụhụ n'ime ikuku na-enye ikuku na mmetọ nke akụkụ ventilat. Ihe nzacha ahụ nwekwara ọgwụgwọ antibacterial.
A na-eji nhicha nhicha ma ọ bụ mmiri eme nhicha nzacha lusgbachapụ. A naghị ewepụ ihe mgbochi antibacterial. F8 nyo bụ dị ka ngwa a nyere iwu pụrụ iche, mana mgbe arụnyere, ọ na-ebelata ikuku na-agbada ruo 40 m³ / h.
Ọnọdụ ventilashị: Igwe na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ na ikuku ikuku ma ọ bụ ọnọdụ nnweta ikuku na ọsọ ọsọ. Bụrụ na nke synchronous ọrụ nke abụọ ejikọrọ ventilators otu unit na-arụ ọrụ na ọkọnọ mode na onye ọzọ na wepụ mode.Imu Mode:Igwe ventilat ahụ na-agba ọsọ okirikiri abụọ, 65 sekọnd ọ bụla, iji nyeghachi okpomọkụ na mmiri.
Omume a na-agbanwe agbanwe nke ventilator ahụ na-eme ka ọ dịghachi ike ma nwee usoro abụọ:
A na-amịpụta ikuku na-emetọ emetọ n'ime ụlọ ma mgbe ị na-agafe ike ikuku seramiiki, onye na-eweghachi ahụ ga-enweta okpomọkụ na mmiri ahụ. Na sekọnd 65, ka regenerator na-ekpo ọkụ, ventilashị na-akpaghị aka tụgharịa n'ọnọdụ ọnọdụ ọkọnọ.
Igwe ikuku dị n'èzí dị ọhụrụ, mana oyi na-asọgharị site na mgbanyụ ọkụ ma na-amịkọrọ okpomọkụ na mmiri a kwakọbara ka ọnọdụ okpomọkụ nke nnweta ikuku wee ga-emechi ọnọdụ nke ụlọ ahụ. Na sekọnd 65, mgbe onye na - eweghachi ume na - ajụ oyi, ikuku na - agbanye na ọnọdụ ikuku ikuku. Okirikiri ahụ malitere site na mbido.
Ezubere ventilat ahụ iji hụ na ịgbanwee ikuku ikuku na-aga n'ihu n'ụlọ, ọfịs, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ ahịa, ụlọ nzukọ na ebe obibi ndi ozo na nke ndi mmadu. Ejiri ihe mkpuchi seramiiki nke na-enyere aka inweta ikuku ohuru ohuru a kpo oku site na nchikota ohuru ohuru. A na-emepụta ventilasị ahụ maka ịrụnye mgbidi ahụ ma mee ya maka ịrụ ọrụ na-enweghị nkwụsị. Airgbọ ebugharị agaghị enwerịrị ngwakọta ọ bụla na-ere ọkụ ma ọ bụ ihe mgbawa, evaporation nke kemịkal, ihe nnyapade, ihe ndị na-egbu egbu, uzuzu uzuzu, soot na akụkụ mmanụ ma ọ bụ gburugburu dị mma maka ịwepụta ihe ndị na-emerụ ahụ (ihe ndị na-egbu egbu, uzuzu, nje na-akpata ọrịa).
Nke gara aga: All DC Inverter VRF Ntụ oyi
Osote: Rooftop Packaged Air Conditioner
Energy Recovery Ventilator Ngwaahịa
Ọhụrụ Air okpomọkụ Exchanger
Ọhụrụ Air Ventilator Ngwaahịa
Mgbidi Iweghachite Energy Energy
Mgbidi Akwadoro Ikuku
Residential Energy Recovery Ventilator na Int ...
Single Room Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Ductless Okpomọkụ Energy R ...
Vetikal Energy Recovery Ventilator na HEPA F ...